Mametaka mafana: inona izany, karazana, fomba ampiasana azy ... | Fitaovana maimaim-poana
Mametaka mafana: inona izany, karazana, fomba ampiasana azy ...
Isaac | 15/11/2021 11:38 | Fitaovana elektronika
La lovia mafana dia akora ampiasaina betsaka amin'ny ny tontolon'ny elektronika. Amin'ny ankapobeny ho toy ny interface tsara hanatsarana ny hafanana hafanana eo amin'ny avo-performance fanodinana chips sy heatsinks. Fa tsy ny toerana ihany no ampiasaina, dia azo ampiasaina ihany koa ho an'ny transistors hery avo, mba peltier effect plates, Etc.
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho fantatrao inona marina io akora io, ny asany, ny fomba fampiharana azy araka ny tokony ho izy, ny karazana misy eny an-tsena ary ny marika tsara indrindra azonao vidiana.
1 Inona no atao hoe pasteur thermal?
3 Karazana menaka mafana
4 Inona no vokatra hovidiana?
Inona no atao hoe pasteur thermal?
Azo antsoina amin'ny fomba maro izy io: thermal paste, silicone thermal, menaka mafana, sns. Ireo teny rehetra ireo dia mitovy, ary tsy misy maha samy hafa azy ireo. Enti-milaza zavatra iray manana toetra mahazaka mafana tsara mba hanampy amin'ny fanalefahana ny hafanana tsara kokoa rehefa misy fifandraisana eo amin'ny lafiny roa. Ohatra, rehefa misy heatsink ampiasaina amin'ny puce, mba hamenoana ny "banga" izay mety eo anelanelan'ny lafiny iray sy ny iray hafa ka mahatonga ny conduction hahomby kokoa.
Ny paty mafana dia manana singa samihafa ao aminy fifehezan:
Polymerizable liquid matrix: fototry ny paty izy io, ka mahatonga azy ho zavatra mivaingana. Amin'ny ankapobeny, ireo karazana gel na paty ireo dia matetika mifototra amin'ny silicones (noho izany ny anarany), resin epoxy, acrylates, urethanes, sns., ary azo alamina amin'ny adhesive na pad fa tsy amin'ny endrika pasteo.
poti: ireo famenoana ireo matetika dia maneho eo anelanelan'ny 70 sy 80% amin'ny fitambaran'ny pasteur mafana. Amin'ity tranga ity, dia mety ho tena isan-karazany, toy ny varahina, aluminium, volafotsy, zinc oxide, boron nitride, sns.
Noho ireo fitambarana rehetra ireo dia mety ho ity pasteur thermal ity misy poizina raha atelina. Noho izany dia ilaina ny mitandrina amin'ny fampiasana azy, manasa tanana raha tsy misy fonon-tanana ary aza avela ho azon'ny ankizy. Ankoatra izany, dia manorisory ny hoditra, ny maso ary ny mucous membranes koa izy io, ka tokony hampiasa singa fiarovana ianao rehefa mikarakara azy. Ny video tutorial sasany dia mampiseho ny fomba ampiharan'izy ireo izany na dia amin'ny tanana aza, saingy tsy tokony hatao izany.
Raha eo anoloan'ny singa elektronika vaovao ianao, ary tsy fantatrao tsara raha afaka mampiasa pasteur thermal eny amboniny ianao na inona no ampiasaina, dia manoro hevitra anao aho hamaky foana ny mpanamboatra datasheets. Ao amin'ity antontan-taratasy ity dia hahita fampahalalana momba izany ianao, ankoatra ny filàna fanaparitahana, ny hery, ny mari-pana ambony indrindra sy ny ambany indrindra tohana, ny soatoavina toy ny junction-case, junction-air, sns.
Thermal paste tsy manana fananana ny conductivity mafana, fa koa ny hafa, ary ilaina ny mitandrina manokana azy ireo, satria izy ireo dia afaka mametraka ny fampiasana araka izay singa elektronika. Ity akora ity dia miavaka amin'ny:
Conductivity mafana: Izy io no singa manan-danja indrindra amin'ny pasteur mafana, satria izy io dia zavatra iray izay ny tanjona dia ny manala ny hafanana. Noho izany dia tsy maintsy manana fahaiza-manao tsara amin'ny fitarihana hafanana izy ireo. Ny singa toy ny watt isaky ny metatra-Kelvin dia ampiasaina handrefesana io lafin-javatra io. Miankina amin'ny karazana paty na ny marika, io conductivity io dia mety miovaova be. Ohatra, ny varahina, volafotsy, diamondra na alimo dia manana toetra tena tsara amin'io lafiny io, ny hafa toy ny zinc oxide, aluminium nitride, sns, tsy dia be loatra.
Conductivity elektrika: Misy ifandraisany amin'ny olana iray mety ateraky ny pasteur thermale raha mitondra herinaratra tsara. Amin'ny ankapobeny, ny mpanamboatra pasta dia mampiseho ny fanoherana elektrika atolotry ny vokatra. Ny avo kokoa (ohms isaky ny santimetatra), ny insulator tsara kokoa, ka mety ho tsara kokoa. Raha toa ka ambany ny fanoherana ny paty ary mandeha tsara dia mety hiteraka olana amin'ny circuit fohy izany raha mifandray amin'ny lalana na tsipìka sasany.
Thermic dilatation coefficient: ny tarika hafa ve tokony hojerena. Amin'ity tranga ity, dia tsy maintsy mitady paty izay ny coefficient no ambany indrindra azo atao, izany hoe, mba hanitatra araka izay azo atao amin'ny hafanana. Raha tsy izany dia mety hiteraka olana amin'ny fihenjanana eo amin'ny singa.
Karazana menaka mafana
Misy karazana pasteur thermal maromaro eny an-tsena, ary zava-dehibe ny manavaka ny vahaolana rehetra misy mba hahafantarana hoe iza no hofidiana amin'ny tranga tsirairay, satria samy manana ny azy. tombony sy lesoka:
Fafana fanafanana: izy io dia adhesive na pad izay miasa toy ny fifandraisana amin'ny hafanana ary ny tanjony dia mitovy amin'ny pasteur thermaly, saingy azo ampiasaina mora kokoa, ary tsy misy fifehezana ny habetsahana, manao izay hahazoana antoka fa mihamitombo tsikelikely, sns., satria mipetaka fotsiny amin'ny endrik'ilay singa ho levona na amin'ny heatsink. Amidy mitokana izy ireo, na dia efa napetraka mialoha aza izy ireo amin'ny rafitra vata fampangatsiahana sasany mba hanamora ny fivoriambe. Amin'ny ankapobeny dia vita amin'ny savoka silikônina na paraffina mifangaro amin'ny poti-tsolika mahery vaika. Amin'ny mari-pana ao amin'ny efitrano dia miseho mafy kokoa izy ireo, fa rehefa miasa izy ireo dia mihamatanjaka kokoa.
Mametaka mafana: dia ilay zavatra mivaingana mivaingana amidy ao anaty kapoaka misy borosy, fantsona na syringe ho mora ampiasaina. Ao anatin'ity paty ity dia afaka mahita ireto karazana manaraka ireto ianao:
Ny vy: mampiasa poti-metaly (zinc, varahina, alimo, volafotsy, volamena ...) izy ireo amin'ny famenoana, ary matetika misy loko volondavenona. Tena malaza izy ireo, ary tsy dia lafo loatra. Mitondra tena tsara izy ireo amin'ny resaka conductivity mafana, afaka mampihena ny mari-pana hatramin'ny 6ºC amin'ny toe-javatra sasany. Na izany aza, manana olana izy ireo, ary izany dia ny conductivity elektrika. Satria misy poti-by izy, dia mety ho fohy ny fifandraisana eo amin'ny fifandraisana raha misy mitete.
Ceramika: seramika (oxyde zinc, dioxide silisiôma, oxide aluminio, ...), manome loko volondavenona na fotsy ny poti-pofona. Ny teboka matanjaka amin'ireo silikônina mafana ireo dia ny vidiny dia mora ary manana conductivity elektrika ambany, noho izany dia azo antoka kokoa izy ireo raha sendra. Na izany aza, ratsy kokoa ny conductivity mafana, noho izany dia hanampy amin'ny fampidinana ny mari-pana 1 hatramin'ny 3ºC raha oharina amin'ny interface tsy mampiasa azy.
karbaona: lafo kokoa sy vaovao kokoa izy ireo, saingy manome vokatra tsara kokoa. Izy ireo amin'ny ankapobeny dia natao ho an'ny rafitra mila fanaparitahana hafanana bebe kokoa, toy ny chips overclocked, fitaovana avo lenta na avo lenta, sns. Izy ireo dia mifototra amin'ny singa toy ny vovoka diamondra, oxide graphene, sns. Amin'ity tranga ity, ny fananana dia saika tonga lafatra, satria amin'ny lafiny iray dia manana conductivity mafana tsara toy ny metaly izy ireo, ary amin'ny lafiny iray dia manana conductivity elektrika ambany izy ireo toy ny an'ny seramika.
Metaly ranoka: Tsy dia mahazatra loatra izy ireo, fa matetika ampiasain'ny mpanamboatra na mpankafy sasany amin'ny blocs heatsink amin'ny unit fanodinana sns. Na dia manana fananana fanaparitahana tsara aza izy ireo, na dia somary tsara kokoa noho ireo miorina amin'ny metaly aza, ity karazana hafa ity dia lafo matetika ary afaka mihetsika amin'ny heatsinks aluminium, satria mampiasa metaly toy ny indium na gallium izy ireo.
grefy: Misy koa ny pasteur thermal hybrid, izany hoe mampifangaro ny singa famenoana samihafa ho fototra hanatsarana ny fananana.
Inona no vokatra hovidiana?
Raha te hividy vokatra paty mafana ianao dia ireto ny sasany ireo marika sy safidy tsara indrindra izay hitanao eny an-tsena:
Pady mafana na pads: ADWITS
Mametaka thermal hybrid: Noctua NT-H1
Ceramic: Tsy misy vokatra.
metaly: Volafotsy Arktika 5
Carbon mifototra: Cooler Master MasterGel Maker
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitaovana maimaim-poana » Fitaovana elektronika » Mametaka mafana: inona izany, karazana, fomba ampiasana azy ...
GND: ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ireo fanafohezana ireo
Raspberry Pi Zero 2W: ny vaovao indrindra amin'ny Raspberry Pi